OtuHigh: Nyocha na Sochie Ntughari Blogger gị. Martech Zone
Ndị ọrụ ibe Chris Abraham dere banyere azịza mgbasa ozi blogger a na-akpọ GroupHigh. OtuHighUsoro ntanetị dị n'ịntanetị na-enye ihe niile ịchọrọ iji mee mgbasa ozi blogger.
GroupHigh na - enyere gị aka ịchọta ndị na - ede blọgụ ngwa ngwa maka mgbasa ozi ị na - aga site na ntanetị na ntanetị na ntanetị na ntanetị. Data gụnyere isiokwu, nchọpụta obodo, ozi blọgụ, akụkọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ihe ofufe na ndị na-eso ụzọ, ikike ọchụchọ nke sitere na Moz) na stats sitere na Compete.com na Alexa. Ikpo okwu na-enye ndị ọrụ ohere ịchọta, soro na ọbụna ekenye blọọgụ na mkpọsa. I nwekwara ike ịmepụta ndepụta blogger site na ịbubata URL site na ntanetị.
Okporo ụzọ mwekota na-agụnye blog si kwa ọnwa ọbịa, na peeji nke echiche, na peeji nke-kwa-nleta. Nakwa, ị ga-ahụ ọnụọgụ maka njikọta mmekọrịta mmadụ na Twitter, Facebook, Youtube, Google+, LinkedIn, Pinterest, na Instagram yana etu ndị na-ede blọgụ si nwee ọwa na mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụla.
Njikwa mmekọrịta nke GroupHigh na-eme ka ọ dị mfe ịmepụta mmekọrịta ọhụrụ, na-echekwa ndị nke gị, soro mmekọrịta ndị ahụ, ma na-emekọ ọnụ dị ka ndị otu na mbọ ị na-agba.
Email Ndepụta - Hụ mgbe gị na ndị na-ede blọgụ kwurịtara okwu n’ikpeazụ.
Kpọtụrụ Records - Hazie nkwukọrịta gị site na ịchekwa ozi kọntaktị na kọntaktị blogger gị.
Njikọ Aka Multi-User - Lelee ma hazie akụkọ ihe mere eme n'ofe otu gị ma ọ bụ ngalaba niile.
Ihe Ncheta - Na-emetụ ndị na-ede blọgụ gị oge niile ma soro mmekọrịta a.
Kenye ndị na-ede blọgụ - Na-arụ ọrụ dị ka otu ìgwè? Nye ndị na-ede blọgụ otu onye otu ka ha mepụta otu kọntaktị ma wepụ ihe ize ndụ nke ọtụtụ mmadụ na-etinye otu blogger.
Lelee ma chọọ posts na nso nso nke blog na-ahapụghị ngwa GroupHigh. Bookmark Target Posts nke mere na mgbe ọ na-abịa oge pitch ị nwere ike ọmụmaatụ a kapịrị ọnụ post. Mara nke ọma otu blọọgụ si rụọ ọrụ na mmemme azụmaahịa n'oge gara aga site na ịlele ma ha ewerela akwụkwọ ndị ọbịa ma ọ bụ sonye na nyocha ngwaahịa ma ọ bụ inye ego. I nwekwara ike ibe edokọbara blọọgụ na posts site na ebe ọ bụla n'ime otu ndepụta GroupHigh gị.
Kacha ọhụrụ mmelite gụnyere:
Ọnwa na Month atụmatụ
Ike ọchụchọ siri ike gafere nde nde mmetụta, ndị na-ede blọgụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
Nchọpụta Backlink na niile posts
Nchịkọta ọdịnaya na nde 80 posts
Ibubata ndepụta URL ọ bụla maka nyocha ozugbo
Njikọ aka na Instagram, Youtube na Twitter
N'ime 45 Metrik iji gosipụta na nyo na anatara
Nzacha n'elu ụdị mgbasa ozi 24 dị iche iche
Nhazi siri ike na ozi kọntaktị maka ihe ndekọ niile
Mmetụta itinye ọdịnaya, nyocha na ịkọ akụkọ
Gburugburu ụwa gafere asụsụ 26
Tags: gaa blogger outreachchris Abrahamchọta ndị na-ede blọgụchọta ndị na-eme iheotuNdị na-emerụ ahụije ozigbo